Madaxweyne Deni : Marna ma ogolaan doono natiija ka soo baxda wadahadal kasta oo lala galo Somaliland – Kalfadhi
Madaxweyne Deni : Marna ma ogolaan doono natiija ka soo baxda wadahadal kasta oo lala galo Somaliland
Kalfadhiga 46-aad ee Baarlamanka Puntland ayaa maanta ka furmay Xarunta Golaha Wakiilada maamul-goboleedka Puntland.
Maamulka Puntland ayaa ka hor yimid shir ka socda dalka Jabuuti ee dhex maraya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jamhuuriyadda goonni isutaageeda ku dhawaaqday ee Somaliland.
Madaxweyne Deni ayaa sheegay in maamulka Puntland aysan akhbali doonin natiija walba ee ka soo baxda wadahadallada u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland.
Guddoomiyaha Baarlamanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf ayaa sidoo kale sheegey in aysan qayb ka ahayn shirkaas aysanna aqbali doonin.
Hadaladan ayaa ku soo beegmaya xilli Jabuuti uu shalay ka furmay shir dhex maraya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jamhuuriyadda goonni isutaageeda ku dhawaaqday ee Somaliland.
War-murtiyeed laga soo saaray shirkaasi ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyay in la sameeyo guddi farsamo oo wada jir ah, kuwaas oo hawsha halkaa ka sii wadi doona isla markaana dib u eegi doona waxyaabaha horey loogu heshiiyay, in labada dhinac aanay siyaasadeyn kaalmooyinka horumarineed iyo maalgashiga iyo in dalka Jabuuti uu noqdo madasha kulammada dhanka farsamada ee lagu sii dhaqaajinayo wada-hadallada. Xigasho BBC.